﻿	Etu esi eme mkpuru ugu a Roara n’ọkụ - Ezumike
kedu ka ị si esi sie ofe anụ ezi
kedu ka ime nduku na-atọ ụtọ
ihe a ga-eji anụ fajita mee
ọdịiche dị n'etiti ihendori tomato na pasta ihendori
kedu ihe m ga-eji na ebe ulo ozuzu okuko
Etu esi eme mkpuru ugu a Roara n’ọkụ
Mkpụrụ asara n'ọkụ Mkpụrụ bụ ihe na-atọ ụtọ, crunchy nri ha na-adị mfe ime!
esi ewepu jello na ebu plastik
Mkpụrụ ugu, dị ka ọtụtụ mkpụrụ ndị ọzọ, bụ crunch na-atọ ụtọ. Naanị itucha, oge na akpọọ nkụ.
Fall bụ zuru oke oge nke afọ niile ọkacha mmasị m ugu Ezi ntụziaka site na Cookies Chip Chocolate Mgbawa Kuki gaa n'ụlọ Ugu achịcha ! Ka ị na-akpụ ugu gị ka ị mee oriọna jack-o-lantern afọ a, atụfula mkpụrụ ndị ahụ!
Esi Esi Mkpụrụ Mkpụrụ
Nke a bụ ihe omume na-atọ ụtọ ị ga-eme na ụmụ gị mgbe ha kwụrụ!
Hichaa ma sachaa mkpụrụ osisi ugu.
Ghaa mkpụrụ na ntakịrị mmanụ na oge.
Ime kwa uzommeputa n'okpuru ruo mgbe ọlaedo.
Tọ na-atọ ụtọ echiche
Ihe ndi a bu uzo ole m kachasi nma n’oge. Malite na mmanụ agba mmanụ.
Arụrụ n'ụlọ ranch sizinin
Cinnamon na shuga
Yabasị na galik ntụ ntụ na nnu sizinin
Arụrụ n'ụlọ Taco sizinin
Arụrụ Chili Powder , afanyekwa nzu na nnu
Etu esi eri mkpụrụ osisi ugu
Mkpụrụ ara n'ọkụ Mkpụrụ bụ ọkacha mmasị na ị nwere ike iri shea ma ọ bụ bee mkpokoro ma rie ha karịa ka ị ga-eri mkpụrụ sunflower. Achọpụtara m obere ugu nwere obere mkpo dị nro ma ọ ka mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ iri ihe niile. Mkpụrụ osisi a Roara n'ọkụ bụ nhọrọ nri dị ukwuu n'ọnọdụ ndị na-agbawa agbawa ma ọ bụ croutons.
Dị ka ọtụtụ mkpụrụ, mkpụrụ ugu a haveara n'ọkụ nwere ọdịnaya dị abụba dị elu ma kwesiri ịchekwa ya n'ime akpa ikuku dị jụụ, ebe akọrọ. Mkpụrụ ugu ga-echekwa nke a ihe dịka ọnwa 3-4.
N'aka nke ọzọ, tinye ha n'ime akpa akpọchiri ma pịa ha n'ime friza. Ha ga-anọrịrị na friza ruo otu afọ.
oven butere mashed nduku achịcha uzommeputa
5site na3votu NyochaNtụziaka
Mkpụrụ asara n'ọkụ Mkpụrụ
Oge Nkwadebeiri na ise Nkeji Oge nri30 Nkeji Oge zuru ezuAnọ Nkeji Ọrụ4 servings Onye edemedeHolly Nilsson Mkpụrụ Mkpụrụ Roara n'ọkụ bụ ihe na-atọ ụtọ, nke na-esi ike nke na-adị mfe ime n'ụlọ! Bipute Ntụtụ
▢1 iko osisi ugu
▢1 ngaji mmanụ oliv
▢nnu nụrụ ụtọ
▢sizis dị ka achọrọ lee ndetu
Kpochapu oven ruo 300 Celsius.
Dị ọcha ugu osisi wepụ ihe ọ bụla pulp ma ọ bụ emep uta eri. Itucha nke ọma ma kpoo nkụ.
Ghaa mkpụrụ osisi ugu na mmanụ oliv (ihe dị ka 1 ngaji kwa iko mkpụrụ) na ihe achọrọ.
Debe mkpụrụ na mpempe mmiri na akpọọ nkụ 15 nkeji. Nwuo ma mee ihe ọzọ ruo minit 10-15 ma ọ bụ ruo mgbe ọlaedo.
Ihe oriri na-edozi ahụ bụ maka iko 1/4 nke mkpụrụ. Ntụzi aro:
Chili Powder, afanyekwa nke wayo na nnu
Na-eje ozi:Ugboro abụọiko,Calorisị:Ogbe 120,Carbohydrates:abụọg,Protein:5g,Abụba:iri na otug,Abụba Ajuju:abụọg,Sodium:1mg,Potassium:Ogbe 129mg,Eriri:1g,Sugar:1g,Vitamin C:1mg,Calcium:7mg,Iron:1mg
Isiokwuosisi ugu N'ezieNri Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .